Umzantsi-mpuma we-United States unamakholeji aphezulu kunye neeyunivesithi, kwaye iiphakethi zam eziphezulu zivela kwiikholeji ezincinane zobungcali kwiiyunivesithi zelizwe. I-UNC Chapel Hill, iVirginia Tech, uWilliam noMary, kunye neYunivesithi yaseVirginia bavame ukuvela kwiiyunivesithi zikarhulumente eziphakamileyo ezili-10 zelizwe, kunye noDuke ngenye yeyunivesithi ezizimeleyo ezizimeleyo. Iikholeji kunye neeyunivesithi ezingezantsi zikhethwe ngokusekelwe kwizinto ezinjengezinga lokugcina, izinga lokugqweswa, ukubandakanywa kwabafundi, ukhetho kunye nokubaluleka jikelele. Ndiye ndabhala izikolo ze-alfabhethi ukuphepha ukuhlukana okungaqhelekanga okuhlukanisa # 1 kwi # 2, nangenxa yokungabi nantlupheko yokuthelekisa uphando olubanzi lweyunivesithi kwizikole elincinci lezobugcisa.
Iikholeji neeyunivesithi kwoluhlu olungezansi zikhethwe ukusuka kummandla wase-South Atlantic waseUnited States: iFlorida, iGeorgia, iNorth Carolina, iSouth Carolina, iVirginia ne-West Virginia.
Agnes Scott College. I-Diliff / Wikimedia Commons
Indawo: Decatur, Georgia
Ubhaliso: 927 (bonke abafundele i-grade)
Uhlobo lweziko: iikholeji zobunini bobucala beekholeji
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zezilwanyana eziphezulu zelizwe; xabiso kakhulu; Umlinganiselo we-9 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; Ukufikelela lula kwiAtlanta; ekhenkethi ekhangayo
Ukufumana ulwazi olungaphezulu kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprofayile ye - Agnes Scott College
KwiCyunion University. Blue Sun Photography / Flickr
Indawo: Clemson, South Carolina
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi ezikarhulumente eziphakamileyo zelizwe; xabiso elungileyo; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; indawo ekhangayo kwiinqanaba zeentaba zeBlue Ridge; Iiprogram zezoshishino kunye nobunjineli. ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprojekthi yaseClemson yaseYunivesithi
Ikholeji kaWilliam noMary
Ubhaliso: 8,617 (6,276 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi eziphakamileyo zaseburhulumenteni zelizwe; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; Isiko lesibini elidala lezemfundo ephakamileyo kweli lizwe (elisekwe ngo-1693); ilungu leCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iKholeji likaWilliam noMariya
Davidson College. funceruser / Flickr
Indawo: Davidson, North Carolina
Ubhaliso: 1,796 (zonke iidanga lokuqala)
Ukwahlukana: Isahluko sePhi Beta iKappa ngenxa yamandla ayo kwi-liberal arts kunye nezesayensi; enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu kakhulu zelizwe; kusekwe ngo-1837; Ukuhlonipha ikhowudi kuvumela iimviwo ezizimeleyo; ilungu leCandelo le-NCAA iNdibano ye- Atlantic 10
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iphrofayli yaseColumbia
IDuke University. mricon / Flickr
Indawo: Durham, North Carolina
Ubhaliso: 15,735 (aba-6609 abafundiswe phantsi)
Uhlobo lweziko: eyunivesithi yangasese
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi ezilishumi eziphezulu zelizwe; inxalenye "yongxantathu yophando" kunye ne- UNC Chapel Hill ne- North Carolina State University ; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela i- Duke University profile
University of Elon. ifoto ngokunyanisekileyo ye-Elon University / i-Ofisi yoLudano lweYunivesithi
Ubhaliso: 6.739 (6,008 izifundo eziphantsi)
Ukuphazamiseka: Inqanaba eliphezulu lokubandakanya umfundi; Iinkqubo ezinamandla zokufunda kwamanye amazwe, ukuqeqeshwa kwezifundo kunye nomsebenzi wokuzithandela; iinkqubo eziphambili zengcali zobugcisa kunye noqhagamshelwano; ikampus ebomvu ebomvu; ilungu leCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association (CAA)
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeYunivesithi yase-Elon
KwiNyuvesi yaseMyory University. Nrbelex / Flickr
Indawo: Atlanta, Georgia
Ubhaliso: 14,067 (6,861 abafundele iidanga)
Ukwahlukana: Isahluko sePhi Beta iKappa sokuba namandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; inkunzi yezigidigidi zeedola; enye yeeyunivesithi ezilungileyo kakhulu zelizwe; kwikhaya kwelinye lezona zikolo ezilishumi eziphezulu
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeYunivesithi yase-Emory
I-Florida State University (FSU)
EFlorida State University. Jax / Flickr
Indawo: Tallahassee, Florida
Ubhaliso: 41,173 (32,933 izifundo zakudala)
Iintlukwano: Enye yeenkampu zee-campuses zaseFlorida kwinkqubo yeyunivesithi yombuso; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; inkqubo yobudlelwane kunye nobutyebi; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseFlorida State University
KwiYunivesithi yaseFurman. JeffersonDavis / Flickr
Indawo: iGreenville, eSouth Carolina
Ubhaliso: 3.003 (2,797 abafundiswe phantsi)
Abafundi babelana ngemibono yabo yeFurman
Ukwahlukana: umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; Umgangatho ophezulu wokubandakanya umfundi; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA I iNkomfa yesiFunda
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yeYunivesithi yaseFurman
Uhlobo lweziko: i- yu
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi eziphakamileyo zaseburhulumenteni zelizwe; esinye sezikolo zobunjineli eziphezulu ; xabiso kakhulu; kwidolophu yasezidolophini; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili ye-Georgia Tech
Indawo: Hampden-Sydney, eVirginia
Ubhaliso: 1,027 (zonke iidanga lokuqala)
Uhlobo lweziko: iikholeji zobunini bobugcisa obuzimeleyo kunye neCawa yePresbyterian
Ukwahlukana: umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; Ikholeji ye-10 edala e-United States (esekelwe ngo-1775); ekhangayo i-1,340-ekre campus; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; enye yeekholeji ezimbalwa zeendoda kwilizwe
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseHolden-Sydney
Ukwahlukana: Izithuba eziphezulu zexabiso kunye nemfundo esemgangathweni; ikampus ekhangayo iquad evulekile, echibi, kunye ne-arboretum; ilungu leCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association kunye neNkomfa ye-Athletic yase-Eastern College
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayili yaseJacob Madison University
Ikholeji entsha yaseFlorida
Ikholeji entsha. markus941 / Flickr
Indawo: Sarasota, Florida
Ubhaliso: 875 (zonke iidanga lokuqala)
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zobuninzi bobugcisa be-liberal ; i-campus yolwandle; Ikharityhulam ejoliswe kubafundi ayinabo abahlukileyo bendabuko kwaye igxininisa isifundo esizimeleyo; abafundi bafumana ukuhlolwa okubhaliweyo kunamabanga; xabiso elungileyo
Hlola iCampus: Uhambo lweKholeji entsha
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iNew College yaseFlorida iphrofayli
IYunivesithi yaseNorth State State Raleigh
Ibhola leBhola leNyuvesi yeNtshona. opus2008 / Flickr
Indawo: Raleigh, North Carolina
Ubhaliso: 33,755 (i-23,827 izifundo zakudala)
Ukuphazamiseka: Iyunivesiti enkulu kunazo zonke eNorth Carolina; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; iinkqubo zesayensi kunye nezobunjineli ezinamandla; ilungu elisekwayo kwiCandelo le-NCAA I- Nkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yeNtshona yeNtshona
IRollins College. mhaling / Flickr
Indawo: I- Winter Park, eFlorida
Ubhaliso: 3,240 (2,642 izifundo eziphantsi)
Ukwahlukana: umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; ephakamileyo yamagosa enyuvesi kwisezantsi; i-ekra-70 yekreksi ekwiiLake Virginia; ukuzibophelela okuqinileyo ekufundeni ngamazwe; ilungu leNkqutyana ye-NCAA II i-Sunshine State Conference
Hlola i-Campus: Uhambo lwekotishi ye-Rollins
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeekholeji zeRolins
Ikholeji yaseSpelman. waynetaylor / Flickr
Ubhaliso: 2,125 (zonke iidanga lokugqibela)
Uhlobo lweZiko: ezizimeleyo kuzo zonke iibhinqa zezemveli zezobugcisa zobuninzi
Ukwahlukana: umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; enye yeekholeji zezona ziphezulu zeentombi zelizwe; isesikweni esiphambili esikolweni ekukhuthazeni ukuhamba koluntu; isahluko sePhi Beta Kappa malunga namandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iProfilman College profile
Yunivesithi yaseFlorida. randomduck / Flickr
Indawo: Gainesville, eFlorida
Hlola i-Campus: IYunivesithi yaseFlorida I-Tour Photo
Ukuphazamiseka: Ilungu loMbutho weeMerika kwiiNyuvesi zeeNkqubo zoPhando ezinamandla; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; amasimu asemgangathweni angaphambili ngaphambili njengengcali, ubunjineli kunye nezesayensi zezempilo; ilungu leCandelo le-NCAA I- Southeast mpu nganiso
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseFlorida
Yunivesithi yaseGeorgia. hyku / Flickr
Indawo: Athene, eGeorgia
Iintlukwano: Imbali ebutyebi eqala ngo-1785; Iprogram yoHloniphekileyo ehloniphekileyo yabafundi abaphumelele kakhulu; indawo ekholekileyo yedolophu; isahluko sePhi Beta Kappa kwizobugcisa obunamandla kunye nezesayensi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedata yokungeniswa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseGeorgia
KwiYunivesithi kaMary Washington
KwiYunivesithi kaMary Washington. Jte288 / Wikimedia Commons
Indawo: Fredericksburg, Virginia
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zobuninzi bobugcisa be-liberal ; iphakamileyo kakhulu kwixabiso layo kunye nexabiso; Iikhamera ezili-176 ezikhangayo kunye neJeffersonian izakhiwo; isahluko sePhi Beta Kappa malunga namandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokumkelwa, tyelela iprofayili yaseYunivesithi yaseMary Washington
KwiYunivesithi yaseMiami. Ukutshiswa / uFlickr
Indawo: Coral Gables, eFlorida
Ubhaliso: 16,744 (i-10,792 iiporogram)
Ukwahlukana: Inkqubo ehlonishwa kakuhle kwi-Biology Biology; iinkqubo ezithandwayo zoshishino kunye nononophelo; abemi abahlukeneyo; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseMiami
IYunivesithi yaseNorth Carolina Chapel Hill
I-UNC Chapel Hill - I-Old Well. USeth Ilys / Wikimedia Commons
Indawo: Hill Hill, North Carolina
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi eziphakamileyo zaseburhulumenteni zelizwe; kwikhaya kwelinye lezona zikolo zoshishino eziphantsi kwesibini ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi olungaphezulu kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iphrofayili ye - UNC Chapel Hill
Ukubhalisa: i- 15,740 (13,914 iiporogram)
Ukwahlukana: Iinkqubo ezinobuchule ezinobugcisa, imfundo, unxibelelwano kunye noongikazi; xabiso kakhulu; efumaneka kwimitha embalwa ukusuka e-Atlantic Ocean; ilungu leCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile ye-UNC Wilmington
KwiYunivesithi yaseRichmond. rpongsaj / Flickr
Indawo: Richmond, Virginia
Ubhaliso: 4,131 (3,326 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: u- 8 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule ; ubungakanani beklasi yobukhulu be-16; isifundo esinamandla kwiprogram engaphandle; ilungu leCandelo le-NCAA iNdibano ye- Atlantic 10 ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; ezijongene kakuhle neeprogram zezolimo
Hlola i-Campus: IYunivesithi yaseRichmond Photo Tour
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iYunivesithi yasePro Richmond
KwiYunivesithi yeSouth Carolina
KwiYunivesithi yeSouth Carolina. Florencebballer / Wikimedia Commons
Indawo: Columbia, South Carolina
Ubhaliso: 34,099 (25,556 izifundo zakudala)
Ukwahlukana : Inkampu ye-Flagship ye-South Carolina yunivesithi; Iiprogram ze-350 degree; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; eyaziwayo kunye neprojekthi yokuphayona yabafundi bonyaka wokuqala; ilungu leCandelo le-NCAA I- Southeast mpu nganiso
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokumkelwa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseSouth Carolina
Yunivesithi yaseVirginia. rpongsaj / Flickr
Indawo: Charlottesville, Virginia
Ukwahlukana: Elinye leyunivesithi ephakamileyo yoluntu ; isibonelelo esikhulu kunazo zonke iyunivesithi yoluntu; ilungu loMbutho weeMerika zaseYunivesithi ngamandla ophando; isahluko sePhi Beta Kappa kwiinkqubo ezinamandla kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseVirginia
Virginia Military Institute. Mrzubrow / Wikimedia Commons
Indawo: Lexington, Virginia
Ubhaliso: 1,713 (zonke iidanga lokugqibela)
Uhlobo lweziko: iikholeji zempi zaseburhulumenteni
Ukuphazamiseka: Ikholeji yamandulo kunabo bonke base-US; iimeko zekholeji eziqeqeshwe kwaye zifuna; iinkqubo zobunjineli ezinamandla; ilungu leCandelo le-NCAA INgqungquthela yaseMzantsi Afrika
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokumkelwa, tyelela iphrofayili yaseVirginia Military Institute
Indawo: Blacksburg, Virginia
Uhlobo lweziko: iyunivesiti kawonkewonke kunye nekholeji yamagosa amakhulu
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi eziphakamileyo zaseburhulumenteni zelizwe; esinye sezikolo zobunjineli eziphezulu ; isahluko sePhi Beta Kappa kwiinkqubo ezinamandla kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedata yokungeniswa, tyelela iphrofayili yaseVirginia
I-Wake Forest University iHolo yoBuhlala kwiHolo. NCBrian / Flickr
Indawo: Winston-Salem, North Carolina
Ubhaliso: 7.968 (4,955 abafundi bezithuba eziphantsi)
Ukwahlukana: Enye yeeyunivesithi ezikhethiweyo ezinezicelo zokuvavanya ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; amacandelo amancinci kunye nomlinganiselo ophantsi wabafundi / ubuchule ; ilungu leCandelo le-NCAA iNkomfa ye-Atlantic Coast
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli ye - Wake Forest University
IWashington neYunivesithi yaseLee
IWashington neYunivesithi yaseLee baxhasi / Flickr
Ukubhalisa: i- 2,160 (i-1,830 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: Enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu kakhulu zelizwe; yasungulwa ngo-1746 kwaye yanikwa iGeorge Washington; iklasi ekhangayo kunye neembali; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; kwamkelwa kakhulu
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yaseWashington neyeeYunivesithi
IWofford College yaseGibbs Stadium. IGreenstrat / Wikimedia Commons
Indawo: Spartanburg, South Carolina
Ubhaliso: 1,683 (zonke iidanga lokufunda)
Ukwahlukana: umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; I-campus yiSizwe soMlando weSizwe esiMiselweyo; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ukhuphisana kwiCandelo le-NCAA I iNkomfa yaseMzantsi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yeWofford College
Ufuna Ukhulu Kangakanani?
Biography kaJohn Brown
Ukuchithwa kweeMfundiso zeMatriki
Gcina i-String (okanye i-Object) kunye neCandelo kwi-ListBox okanye kwi-ComboBox
Yintoni uMbutho weRaelian?